सन्दर्भ शिवरात्रि : भगवान शिव विश्वमा पहिलो मानव अंग प्रत्यारोपणकर्ता – Nepal Japan
नेपाल जापान ९ फाल्गुन १७:२७
आज महाशिवरात्रि विश्वभरका वैदिक सनातनीहरु आराध्यदेव भगवान शिवको पूजा आराधनामा मग्न छन् । शिव शान्ति, कल्याण र दयाका प्रतीतक अनि सृष्टि संरचनाका असम्भव कुरालाई सम्भव तुल्याउने महान वैज्ञानिक पनि हुन् ।
आज विज्ञान–प्रविधिले सम्भव तुल्याएको मानव अंग प्रत्यारोपणको सुरुवात भगवान शिवले गरेका थिए । यसैको प्रभाव हो मानव अंग प्रत्यारोपण सम्भव छ भन्ने कुरा । आज विज्ञानले केही अंग प्रत्यारोपण सम्भव तुल्याए पनि मानव शिर प्रत्यारोपण गर्न सकेको छैन । तर भगवान शिवले शिर छेदन भएका मानिसमा अरु जीवको शिर प्रत्यारोपण गरेर जीवित तुल्याएका थिए ।
दक्षप्रजापतिको शरीरमा बोकाको टाउको र गणेशका शरीरमा हात्तीको टाउको जोडेका कथाहरु हामीले शास्त्रहरुमा पढ्दैआएका छौं । त्यसैले भन्न सकिन्छ भगवान शिव किन आराध्यदेव भए भनेर ।
पूर्वीय सभ्यता, संस्कृति र परम्पराको जग वेद हो । वेद भनेको विज्ञान हो– ज्ञान हो । वेदले जे सम्भव छ भनेर लेखेको छ त्यो भएको छ । आज विज्ञानले अनेक अन्वेषणहरु गरिरहेका छन्, यसको सूत्र वेद नै हो । हाम्रा शास्त्रहरुले उल्लेख गरेका धेरै कुरा अहिले प्रमाणित भएर सम्भव देखिएका छन् । एउटा अर्को उदाहरणका रुपमा ‘टेष्ट टुयूब बेबी’लाई लिन सकिन्छ ।
मानिस तथा अन्य जीवको जन्म मैथुनी क्रियाद्वारा हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर शास्त्रहरुले अमैथुनी क्रियाद्वारा मानिस तथा जीवको जन्म हुने तथ्य प्रमाणित गरेको थियो र आज विज्ञानले यो प्रयोगमा ल्याएको छ । यो विज्ञानको चमत्कार भनिन्छ । तर यसको आधार हजारौं वर्षअघि नै तयार थियो । कौरब र पाण्डवका पिताहरु अमैथुनी क्रियाबाट जन्मेका थिए । आजभोलि ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ भनेजस्तै ।
आज शिवरात्रिको सन्दर्भमा शास्त्रले उल्लेख गरेका विषयहरुको अति न्यून पक्षलाई उल्लेख गरेर आधुनिक समाजमा यसको महत्व दर्शाउनेको अभाव भएकाले हाम्रा शास्त्रहरु पूजाकोठाको शोभा मात्र बने । परिणाम के निस्क्यो भने हामीले पश्चिमाले घोकाइदिएको पाठ पढेर आफ्नोपन भुल्दै गयौं । आज संसारमा जेजति आविस्कार भएका छन, जेजति प्रविधिको विकास भएका छन्, हातहतियारदेखि वायुयानसम्म ती सबैका कल्पना वेदका विभिन्न हाँगाका शास्त्रहरुले सविस्तार वर्णन गरेको छ । यी सबै उतिबेलै अस्तित्वमा थिए । यी सबै कुराहरु लिपिबद्ध भएको शास्त्र हामीले पूजा गरेर राख्यौं, त्यही शास्त्र पश्चिमाहरुले अध्ययन गरेर व्यवहारमा लागू गरे । फरक यत्ति हो ।
माथी नै उल्लेख गरियो कि– शिव भगवान मानव अंग प्रत्यारोपण गर्ने सृष्टिको पहिलो वैज्ञानिक भनेर । श्री स्वस्थानी व्रतकथा अनुसार आफ्नी अर्धाङ्गीनि सतिदेवीले दक्षप्रजापतिको यज्ञकुण्डमा हामफालेर देह त्याग गरेपछि विक्षिप्त बनेका महादेवले आफ्ना सेना पठाएर दक्षको यज्ञ विध्वंश गरिदिए । दक्षको शिर काटेर यज्ञकुण्डमा होमिदिए । पछि उनै महादेवले दक्षकी पत्नीको अनुनय सुनेर बोकाको शिर दक्षको शरीरमा जोडिदिए । र मानवलाई अंग प्रत्यारोपण मात्र हैन परिवर्तन नै गर्न सकिन्छ भनेर ज्ञान दिए ।
दक्षप्रजातिको मात्र हैन महादेवले नै गणेशको शिरोच्छेदन गरेपछि हात्तीको टाउको जोडिदिएका थिए । आफ्नी पत्नी पार्वतीले ‘बुकुवा’ दल्दा निस्केको मयलको डल्लोबाट मानव आकार दिइन र यसमा शक्ति दिएर द्वारपाले राखिन । महादेव आउँदा उसले द्वार खोलेन । रिसले चुर महादेवले गणेशको शिर छिनाइदिए । पछि पार्वतीको अनुनयपछि हात्तीको टाउको जोडिदिएर जीवन दिएका थिए । गणेशको सन्दर्भ अमैथुनी सृष्टिसंगै अंग प्रत्यारोपणसंग सम्बन्ध राख्दछ ।
यी कुराहरु उल्लेख गर्नुको खास कारण शास्त्र पढेर, बुझेर यसको प्रयोग गर्ने हो भने हामी नेपालीका नाममा कैयौं यस्ता आविष्कार र उपलब्धिका चाङ लाग्नेछ । यसै सन्दर्भमा विश्वविख्यात न्यूरोसर्जन स्व. डा. उपेन्द्र देवकोटाको एउटा कथन यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । उहाँले एक कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो– “न्यूरो अस्पताल बाँसबारीको प्रांगणमा मैले शिवको मूर्ति स्थापना गरेको छु । यसको एउटै कारण छ म भगवान शिवले जस्तै मानव शिर प्रत्यारोपण गर्न सकुँ ।”
हामीले सर्वप्रथम आफूलाई चिन्न सक्नुपर्दछ । यो भनेको हामे धर्म, संस्कृति, परम्परा र हाम्रा शास्त्र अनि यिनमा लिपिबद्ध गरिएका ज्ञान विधानका भण्डारलाई आजको पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । मूलतः विद्यालय तहदेखिको शिक्षामा यस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ अध्यापन गराउने र समयको आवश्यकता अनुसार व्याख्या गराउन सक्ने हो भने धर्मग्रन्थ पढेरै हाम्रा बालबालिकाहरु भोलि आविष्कारक बन्नसक्छन् ।
हाम्रा शास्त्रले जे लेखेको छ र जे कुरा लिपिबद्ध गरेर छोडेको छ त्योभन्दा पर अर्को कुनै ज्ञान छैन भन्ने कुरा पढाउन सक्नुपर्छ । आवश्यकता केवल शास्त्रहरुको व्याख्या समयोचित ढंगबाट गराउने कि पूजा मात्रै गरिरहने भन्ने हो । आम विनाशकारी हतियारदेखि विद्युत, वायुयान, उपचारपद्धति, शल्यक्रिया यी सबै कुरा प्राकृतिक रुपम सम्भव छ भन्ने कुरा वैदिक शास्त्रहरुले दिएको छ यसलाई अब पनि कुनै एक समुदाय वा पन्थको गरिखाने मेसो भनेर आयातितत धर्म, संस्कृति र शिक्षालाई मात्र प्राथमिकता दिने हो भने हामी यहाँभन्दा माथी कहिल्यै उकासिने छैनौं ।